Fahatrarana zava-mahadomelina :: Nivadika vovo-javatra hafa indray ireo nolazaina ho rongony mahery vaika • AoRaha
Nokasaina nopotehina, afak’omaly, ny vovoka rongony mahery na « héroïne »milanja iraika amby roapolo kilao, sarona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, tamin’ny volana oktobra 2018. Hita indray fa vovo-javatra hafa ireo nambara fa zava-mahadomelina marobe ireo, rehefa nozahana tamina fitaovana manokana.
«Natao fizahana indroa tamina fitaovana roa ireo vovo-javatra ireo, saingy hita fa tsy amin’ny karazana rongony « heroïne » akory», hoy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny Fitsarana manokana momba ny kolikoly (PC) mandray an-tanana an’ity raharaha zava-mahadomelina ity. Misokatra ny fanadihadiana eo anivon’ny PAC, amin’izao fotoana izao. Saron’ny tompon’andraikitry ny Fadintseranana, teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato tamina lehilahy roa teratany afrikanina ny rongony vovony voalaza fa « heroïne » milanja iraika amby roapolo kilao sy telo ambin’ny sivy folo grama, ny volana oktobra lasa teo. Nogiazana ireo entana.
Natao famotorana kosa ireo Afrikanina roa lahy. Volana vitsivitsy taty aoriana, nahazoana alalana tamin’ny Fitsarana ny fanapotehana an’ireo zava-mahadomelina ireo. Mialoha izay, nanao fizahana fanamarinana ny momba azy ireo ny avy ao amin’ny PAC. Teo no nahitana fa zavatra hafa ireo voalaza fa « héroïne ». Tsy mbola fantatra izay mety ho nanoloana azy.
«Nitazona an’ireo vovoka rongony ireo no nataonay, taorian’ny nahasaronanay azy. Voaara-maso foana ireo zavatra ireo, nandritra izay fotoana izay. Afaka manao fanadihadiana ny ao amin’ny PAC hahafantarana ny marina rehetra amin’ity tranga niseho ity», hoy ny avy amin’ny Fadintseranana.
Hosoka sy fanamparam-pahefana :: Loholona iray voarohirohy amina fivarotana tany
Misaona ny tarika RyKala vazo :: Nodimandry vokatry ny lalan-dra tsentsina i Mitchou